Hajjii bara 2020 irraa maal beekuu barbaaddu? - NuuralHudaa
Hajjii bara 2020 irraa maal beekuu barbaaddu?
Utubaalee Islaamaa shanan jidduu tokko Hajjii dha. Nama Muslimaa godhuu dandahu hunda irratti dirqama. Kutaa addunyaa gara garaa irraa Muslimoonni miliyoona lamaatti lakkaa’aman wagga waggaan Hajjuuf gara Sa’uudiitti ni imalan.
Haa ta’uu malee bara kana sababa weerara dhibee Koroonaa Vaayirasiif uggurri kaayamuu himan. Mootummaan Sa’uudii lammiilee biyyoota gara garaa biyyattii keessa jiraatan muraasa malee, Muslimoota Hajjuuf alaa isitti imalan kan hin keesummeessine tahuu ibsite.
Mootummaan Sa’uudii labsii guyyaa kaleessaa June 22,2020 baaseen biyyattiin hanga ammaatti weerara dhibee COVID-19 waliin qabsotti waan jirtuuf barana namoonni muraasni qofti akka Hajjan hayyame.
Ministeerri Hajjii fi Umraa Sa’uudii “tarkaanfii kana fudhatuun kan barbaachiseef, dhibeen kun iddoo namoonni hedduun itti walitti qabamanitti rakkoo waan fideefi. Fayyaa ummataa eeguuf tarkaanfii tana fudhatuuf kan dirqaman tahuu ibse.
Namoonni muraasni barana akka Hajjan hayyamameef eenyufaa?
Akka Ministeerri Hajjii fi Umraa Sa’uudii Wiixata kaleessaa June 22,2020 labsetti, Hajjii baranaa lammilee biyyoota gara garaa Sa’uudii keessa jiraatan muraasa qofaaf kan hayyamame tahuu beeksise.
Haa ta’u malee ibsa ganama har’aa(Salaasaa June 23,2020) baaseen immoo lakkoofsa namoota hirmaatanii kan daangeessan tahuu ibsame.
Ministirri Hajjii fi Umraa Muhammad Bintiin ibsa har’a miidiyaaleef kenne irratti “mootummaan lakkoofsa Hujjaajjota baranaa irratti qorannoo godhaa jira. Hanga ammaatti ifatti hin murteeffamne. Haa ta’uu malee 1000 ykn immoo sanii gad tahuu mala” jedhe.
Itti dabaluunis “akka kanaan duraatti namoonni 10,000 ykn 100,000 hin hirmaatan” jedhe.
Ministeerri Fayyaa Sa’uudii Towfiiq al Rabi’aah immoo gama isaatiin “namoonni hayyamameef kunis magaalaa kabajamtuu Makkaa gahuun dura qorannoon COVID-19 ni godhamaaf. Eega Hajjan boodaas guyyoota 14’f namarraa addatti of baasanii akka turan ni dirqisiifaman” jedhe.
Akkasumas namoota umriin isaanii 65 ol ta’e fi dhibee waaraa hamaa qabaniif hin hayyamamu jedhe.
KUN MUDANNOO JALQABAATII?
Tarkaanfiin Hujjaajjota alaa seenan ugguruu kun eega sirni mootii Sa’uud Arabiyaa bara 1932 hundeeffamee kaasee, waggaa 90 booda kan jalqabaati. Waggaa 90 asitti mudannoon akkanaa hin dhagahamne. Saniin dura immoo sababa waraanaa fi weerara dhibee daddarbaan tarkaanfiin Hajjii ugguruu fudhatamtee jiraachuu beytoonni himan.
September 21, 2021 sa;aa 2:25 am Update tahe